एईडेन छन्त्याल Archives - Fonij Korea
कोरियामा तलब वृद्धि अगाडी घाँस देखाएर गोरु जोताऊने तरिका मात्रै
आज म यो लेख मार्फत ईपिएस प्रक्रिया मार्फत कोरिया आउने कामदारहरुको तलब वृद्धि र पछिल्लो समय तलब वृद्धिसँगै मेरो केहि अनुभवहरु छोटकरीमा सेयेर गरेको छु । शुरुमा म सन् २०१३ मा कोरिया प्रबेश गर्दा न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा ४८६० कोरियन वन थियो । जसमा २०९ घण्टा काम गर्दा मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक १० लाख १५ हजार ७४० कोरियन वन हुन आउथ्यो । त्यसैगरी क्रमस २०१४ मा ७.२% वृद्धि गरी न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा ५ हजार २१० कोरियन वन, २०१५ मा ७.१% वृद्धि गरी न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा ५ हजार ५८० कोरियन वन, २०१६ माफुर्सदमा
एईडेन छन्त्याल Breaking News, कोरिया Comments are Off
गजलमार्फत नयाँ सरकारलाई विदेशवाट एक नेपाली युवाको ध्यानाकर्षण
गजल/ एईडेन छन्त्याल मेरो देशमा, बेरोजगारको आगो, बलेको छ सरकार । भित्रभित्रै कामै नलाग्ने गरी, जलेको छ सरकार ।। बाध्यता पनि कहाँ सम्मको यो, अठार कट्नै हुन्न झोला बोकी विदेश, चलेको छ सरकार ।। ठूला–ठूला सपना संगाली विदेशिएको ऊ, विरानो यो ठाँऊमा कहिल्यै नउठ्ने गरी, ढलेको छ सरकार ।। बेसाहारा छन गाँऊमा, बुढ्यौली बाआमा, सक्दैनन् गर्न केहि हातगोडा पुरै, गलेको छ सरकार ।। चर्का–चर्का भाषण गर्छौ, देशमा कृषी क्रान्तीको, खेतबारीमा पुरै बन्छो र तितेपाती मात्र, फलेको छ सरकार ।। पुरा भिडियोमार्फत यहाँ
एईडेन छन्त्याल साहित्य Comments are Off
वैदेशिक रोजगारीको लागि उत्कृष्ट गन्तब्य हो कोरिया
एईडेन छन्त्याल कोरियासम्बन्धी लेखहरुमा प्राय कोरियाको दु:ख, कष्ट र पिडाका कुराहरुलाई मात्र पोखिएको पाईन्छ । तसर्थ यस लेखमार्फत मैले कोरियाको रमाईलो पाटोहरुलाई शब्दमा उतार्ने प्रयास गरेको छु । वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारी तवरबाटै कामदार पठाउने भएपछि रोजगारीको लागि कोरिया नेपाली युवाहरुको प्रमुख आकर्षक गन्तब्य बनेको छ । इम्प्लोइमेन्ट पर्मिट सिस्टम (ईपीएस) भाषा परिक्षा पास गरेर कोरिया जानेको संख्या हालसम्म ५० हजार पुगेको छ । नेपालमा काम गर्ने बानी नै नपरेको हामीलाई सुरुवाती केहि दिन घरपरिवारवाट टाढा रहेर निरन्तर एकैप्रकारको काममा १२/१३ घण्टा खट्नुपर्दा यो कोरिया हो की खोरिया हो भन्नेफुर्सदमा
एईडेन छन्त्याल बिचार / अनुभूति Comments are Off
मेरो पहिलो भ्यालेनटाईन प्रेमपत्र
हृदयस्पर्शी मित्र, असिमित यादहरुको साथमा युगौँयुग सम्मको सम्झना अनि अपार मायाँको सौगातहरु !! खै कसरि सुरुवात गरुँ अनि कहाँ लगेर अन्त्य गरुँ । यो मनभरी उब्जिएका भावहरुलाई वटुली कपी र कलमको साहारामा एउटा सानो पत्रको नमुना स्वरुप तिमीसामु पोख्न चाहिरहेको छु । हुनत, मलाई राम्रोसँग थाहा छ, कुनै पनि ब्यक्तिको जीवन चरित्रका वारेमा खुलेआम लेख्ने र भन्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन् । कैयन किसिमका जटिल, भयनाक अनि डरलाग्दा परिस्थितीहरु जन्माउन सक्छ । सृजना गरीदिन सक्छ । तरपनि, म विवश छु । साँच्चिकै विवश ।।। जुन दिनवाट मेरो नयनकोे रेटिनामा तिम्रोफुर्सदमा
नेपाली भाईले कोरियामा माईनस २०/२१ डिग्रीको चिसोमा काम गर्नु पर्दाको पिडा (भिडियोसहित)
एईडेन छन्त्याल हिँऊ । टाढावाट देख्दा, आहा ! कत्ति रमाईलो लाग्ने, मनमोहक देखिन्छ । नेपालमा हुँदा धेरै वर्षको ग्यापमा कहिलेकाहिँ नजिकवाट हिँऊ देखेको मान्छे म । कहिलेकाहिँ मात्र आउने भएर होला उत्सब हुन्थ्यो हिँऊ परेको दिन । खसि कुखुरा जे हुन्छ काटेर खाईन्थ्यो । त्यो नभए पनि अरु बेला भन्दा अलि मिठै पकाएर खाईन्थ्यो । घाँसदाउरा गर्न जानुपर्दैनथ्यो । गाईभैँसीलाई पराल कुँदो खुवाईन्थ्यो, त्यसैले गाईभैँसी चराऊन पनि जानुपर्दैनथ्यो । फोटो खिच्नलाई तछाडमछाड गरिन्थ्यो । दिनभरि हिऊँमा खेलेर पनि धित मर्दैनथ्यो त्यतिबेला । कामै गर्न नपर्ने र मिठो–मिठो खान पाईने भएरफुर्सदमा
एईडेन छन्त्याल Video, बिचार / अनुभूति Comments are Off
विदाई र स्वागत, ह्याप्पी न्यू ईयर !
एईडेन छन्त्याल विदाई कत्ति धेरै पिडाको भारी बोकेर आउँछ । मनमा सन्नाटा छाउँछ । सबै आत्मा पिडामा हुन्छ । आँसुको भेल बर्सिन्छ । तर स्वागतमा भने त्यसको ठिक उल्टो हर्ष अनि उल्लास । पुरानो सकिन्छ, नयाँ आउँछ । अनेकौँ चुनौतीहरुसँग सामना गरेर सकियो यो वर्ष । धेरैजना रँगमञ्चहरुमा रमाएर वित्यो यो वर्ष । धेरै योद्धाहरु युद्ध मैदानमा उभिएर सकियो यो वर्ष । कत्ति ओठहरु मुस्कुराए । कत्ति नयनहरु रसाए । कसैले यो धर्तिमा पहिलोचोटीे पाईला टेके यहि वर्षवाट । कसैले चालेका पाईला अन्तिम पनि बन्यो यहि वर्षमा । कत्तिले योफुर्सदमा
एईडेन छन्त्याल बिचार / अनुभूति No Comments »
कोरीया सपना र वास्तविक भोगाई
कोरियन ड्रामामा देखिने लोभलाग्दो दुनियाँ । कम लागतमै जान पाईने (सामान्य वर्गलाई पनि पैसा जुटाउन खासै समस्या नपर्ने) र सजिलै महिनाको १ लाख कमाई हुने कुरा सुनिसकेपछि मलाई कोरियाप्रतिको मोह एकाएक वढेर आउँछ । महिनाको लाख लाख कमाई हुन्छ भने जावो मासिक ४/५ हजारको जागिर के खान गर्नुप¥यो । त्यसपछि गरिरहेको काम पढिरहेको क्याम्पस सब विचमै छोडेर कोरियाको ठूलो सपना देख्दै कोरियन भाषा पढाउने ठाउँमा गएर भर्ना भई कोरियन भाषा पढ्न थालियो । मनमा पुरै कोरियाकै वारेमा कुराहरु खेल्न थालिसकेछ । लाख कमाईको सोँचले नेपालमा भएको डाक्टर ईन्जिनियर भन्दा पनिफुर्सदमा